Shaqaalaha Jabuuti oo codsanaya urur shaqaale oo midaysan - Sabahionline.com
Waxaa qoray Xarbi Cabdulaahi Cumar oo Jabuuti jooga
Maajo 15, 2013
Shaqaalaha Jabuuti ayaa ka codsanaya labada urur shaqaale ee waddanka ugu wayn in khilaafka u dhexeeya ay dhinac iska dhigaan oo ay u midoobaan sidii xuquuqdooda meelaha ay ka shaqeeyaan ay ugu dagaalami lahaayeen.
Shaqaalaha dekedda Jabuuti oo xamuul dajinaya iyaga oo jooga dekedda Jabuuti bishii Nofeembar 2008. Midawga Shaqaalaha Jabuuti ayaa matala kaluumaysatada, shaqaalaha dekedda iyo shaqaalaha waddooyinka. [Eric Cabanis/AFP]
Tababar la xidhiidha sida wararka looga tabiyo dagaallada oo Jabuuti lagu qabtay
Kibaki oo soo jeediyay in 13.1% la kordhiyo heerka ugu hooseeya ee mushaarka
Cagafcagafyo Jabuuti ku dumiyay dhismayaal sharci darro ah
"Xuquuqda shaqaalaha ayaa heehaabaya, ururrada shaqaaluhuna waxay ku kala qaybsan yihiin sidii ay ku furdaamin lahaayeen dhibaatooyinka haysta shaqaalaha," Cali Xaydar oo ah shaqaale Telecom Jabuuti ka tirsan oo Maalinta May, dabbaaldegga maalinta Maajo 1-deeda ee dhaqdhaqaaqa shaqaalaha caaliamiga, la qaatey shaqaale kale oo Jabuutiyaan ah.
"Hadda, oo ay ka sii daran tahay markii hore, ayaan u bahaan nahay isutag ururrada ah si aan meel adag u istaagno markii aan dawladda kala hadlayno dhibaatooyinka haysta shaqaalaha," ayuu u sheegay Sabahi.
Xaydar ayaa ka hadlayay waddankiisa labada urur shaqaale ee ugu wayn Ururka Guud ee Shaqaalaha Jabuuti (UGTD), kaas oo matala shaqaalaha isgaadhsiinta, macalimiinta iyo wariyayaasha, iyo Midawga Shaqaalaha Jabuuti (UDT), oo matala kalluumaysatada, shaqaalaha dekadda iyo shaqaalaha waddooyinka.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, ayay labadan urur ahaayeen kuwo iska soo horjeeda, halkaas oo UGTD lagu dhaleeceeyay in ay ku fashilmeen in ay hantaan xuquuqda shaqaalaha, dawladda inay u nugul yihiin, ayna si sahal ah isaga aqbalaan siyaasadaha dawladda ee shaqada.
"Xaaladdaas ayaa keentay in UGTD ay aqbasho go'aamada dawladda kana dhigtay xuquuqda shaqaalaha mid aan muhiim ahayn," Cabdi Aadan Rooble oo ah Hoggaamiyaha isutagga UGTD ayaa sidaas yidhi.
Maxamed Saalax oo ah xubin ka tirsan UGTD, ayaa si kastaba ha ahaatee, difaacay midawga. "Intii ay ka hor imaan lahayd qodobada siyaasaadka dawladda ee dhinaca shaqada, ayay UGTD qaadatay istiraatiijiyada wada hadalka," ayuu yidhi.
"Taariikhda ayaa na bartay in khilaafku uusan waxba dhalaynin markii dawladda lala hadlayo," Saalax ayaa u sheegay Sabahi. Iyada oo mahadi ay u noqonaysaa wada hadalka iyo gorgortanka, ayaa UGTD ay ku guulaysatay in ay dawlada ku qanciso fulinta mushaharka ugu yar ee bil la qaadan karo ee shaqaalaha waddanka oo dhan in uu noqdo $200, ayuu yidhi.
Saalax ayaa sheegay in uu waafaqsan yahay codsiga ah in labada urur ay awooddooda mideeyaan. "Waa muhiim in hal cod oo midaysan lagu hadlo, ma aha oo kaliya dhinaca dawladda, laakiin sidoo kale shirkadaha khaaska ah oo aan raacaynin sharciyada ururrada ama xataa sharciyada mushaharka ugu yar ee la qaato," ayuu yidhi.
Hoggaanka UDT ayaa dawladda ku eedeeyay in ay sanado badan ku xad gudbayeen sharciyada shaqaalaha.
Cumar Xasan Waabari oo xubin ka ah UDT ayaa sheegay in dadaalada midawga shaqaalaha ka dhanka ah ee dawladdu ay bilowdeen Sebteembar 1995 markii ay eriday, intii ay la hadli lahayd. shaqaalaha guud kuwaas oo shaqo joojin ugu jiray mushahar kordhin iyo guud ahaanba wanaajinta xuquuqda shaqaalaha.
Xaaladda ayaa sii xumaatay sanadkii 1999 markii shaqaalaha qaarkood ay mudaaharaad sameeyeen iyaga oo codsanaya in shaqadii dib loogu soo celiyo dadkii shaqada laga caydhiyay 1995. Wakhtigaas, ayaa dawladdu diiday in ay wada hadal la samayso ayna jabisay xuquuqda shaqaalaha ee ahayd in ay si nabad ah u mudaaharaadaan, arrimaha noocaas oo kale ahna ay mamnuucday, ayuu yidhi.
Ilaa iyo hadda hab dhaqanka dawladdu wuxuu ahaa in aysan dhiiri galinin madax-bannaanida shaqaalaha iyo midawyadoodaba, codkoodana aamusiinaysa, taas oo ka dhigaysa kuwo nugul xilliga wada hadalka, Waabari ayaa sidaas yidhi. Si arrintaas loo tixgaliyo loona xoojiyo sharciyada shaqaalaha, ayaa wuxuu yidhi, ururada soo hadhay waa in ay si wada jir ah u shaqeeyaan dawladdana iyaga oo wadajir ah ay wadahadal la furaan wixii hadda ka dambeeya.
Maxamed Cabdi oo xagga xirfadaha kala taliya Wasaaradda Shaqaalaha ayaa iska riixay sheegashooyinka ah in dawladdu ay curyaaminaysay midawyada shaqaalaha, wuxuu sheegay in dawladdu mar kasta ay diyaar u ahayd in ay iyaga la shaqayso ayna wada hadal la furto sidii arrimaha aan wali la xallin loo xalliyo.
Tayada ururrada shaqaalaha oo shaki ku jiro
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha Jabuuti ayaa ku kala jaban taageeradooda, walina aan go'aansanin ururkii ay ku biiri lahaayeen.
"Anigu midna kama tirsani sababta oo ah rajadii aan ka qabay waxa laga rabo midawga shaqaalaha wali ma aysan keenin," Sahra Axmed oo ah macallimad 35-jir ah ayaa sidaas tidhi.
"Wakhtigii waxaa la gaadhay labada urur ay miis wada fadhiisan lahaayeen awooddoodana midayn lahaayeen, si shaqaalaha Jabuuti ay u helaan xuquuqdooda iyo si kuwa xaq darrada shaqada looga caydhiyay ay maalin uun shaqada ugu soo noqon lahaayeen," ayay u sheegtay Sabahi.
Amina Jaamac, oo ka shaqaysa bangi, ayaa sheegtay in shaqaalaha Jabuuti aysan kalsooni ku qabin midawyada shaqaalaha oo iyaga matalaya.
"Dadka ayaa aaminsan in ururrada shaqaaluhu aysan awood ku lahayn waaxda khidmada bulshada. Intaasna waxaa dheer, in ay ururrada shaqaaluhu kala qaybsan yihiin, taas oo xuquuqda shaqaaluhu aysan muhiim ahayn," Jaamac ayaa sidaas tidhi. "Markii la fiiriyo xuquuqda midawga shaqalaha, waxaan u baahan nahay ururro ganacsi oo midaysan kuwaas oo la hadli kara dawlada iyaga oo siman."
July 6, 2013 @ 01:04:58PM
aad iyo aad ayaan uga helay
July 1, 2013 @ 04:51:38AM
bis milaah marka hore waan idin salaamay salaan ta is laanka ee aslaa mucalayku warax ma tulaahi wa barakaatu magacaygu waa caaqil ahmed caaqil runtii waan idinku ham bal yey nayaa haw sha aad ku jirtaan gaar a haan dawlad D jabuuti waxaan idin lee yahay guul guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
AHMEDYASIN ABDI ELMI
June 7, 2013 @ 06:16:07PM
Waxaan anigu maamule ka ahay waaxda shaqaalaha ee shirkada General Service Co. Limited. Waxaaan hambalyo u dirayaa shaqaalaha magaalada diridhaba iyo xukuumada jabuuti oo waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan anigu qabaa shirkad ahaan waanu idiin baahan doonaa mustaqbalka, waayo waxaad tihiin dawlad Soomaaliya si wayn u caawisa oo rabta inay na aragto anagoo barwaaqo ah. Waxaan idinkana sidoo kale idiin rajaynayaa horumar.
June 2, 2013 @ 05:33:57AM
anigo ah mamul kuxigenka (company aran)aaran trading≥neral service co.ltd) waxan ugu hambal yena shaqalahad jabuuti iyo dolada jabuuti waxan ini lenahay hambalyo anagana waxan rajenena inan na in bahano madama ad tihin dolad jecl inay dalcawiso somalida dha na kajecel hormarka dalka markasta waxan kuso gaba gaben laha hormar wacan